Sky Net Line ကြည့်ချင်သူများ အတွက် ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » အထွေထွေ » Sky Net Line ကြည့်ချင်သူများ အတွက်
By နေမင်းမောင်10:53 PM30 comments
ကျွန်တော် လည်း နေမကောင်း ဖြစ်သွားထဲက ဆိုဒ်နဲ့တော်တော်လေးကို အဆက်အသွယ် ပြတ်သွားတယ် .. လူကလည်း အဖျားတာရှည် သွားတော့ ဘာမှကို မလုပ်နိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုး ဖြစ်သွားတော့ ဆိုဒ်ရေးဖို့တောင် ဦးမတည်နိုင်ဘူး ဖြစ်သွားလို့ပါ .. ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော် အဝေးရောက် မြန်မာများအတွက် http://www.tvunetworks.com/ ကနေတစ်ဆင့် Sky Net Line ကို တိုက်ရိုက်ကြည့်လို့ ရမဲ့ နည်းလမ်းလေးကို ညီလေးတစ်ယောက် စီကနေ တစ်ဆင့်ရလို့ ပြန်ရှယ် ပေးသွားပါမယ် .. သိပြီးသားသူတွေ ရှိရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီထက်ကောင်းတဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေ ရှိရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြန်ရှယ်ပေးခဲ့အုံး ပေါ့ဗျာ .. အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေတာပေါ့ ... ကျွန်တော် တစ်ချို့ မသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက် အသုံး ပြုလို့ အဆင်ပြေအောင် အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ တစ်ဆင့်ချင်း ပြပေးထားပါတယ် .. စစချင်း မလာခင်တော့ နည်းနည်း စောင့်ရပါတယ် .. ကောင်နက်ရှင်ကြောင့်လားတော့ မပြောတက်ဘူး .. နောက်ပိုင်းလိုင်းလာပြီ ဆိုရင်တော့ ပုံမှန် ကြည့်နေရသလို အဆင်ပြေပြေ ကြည့်လို့ရတော့ အဆင်ပြေပါတယ် ..
အရင်ဆုံး အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ လင့်ကနေတစ်ဆင့် သွားလိုက်ပါ ..
နောက်ထပ် ဆက်လုပ်ရမဲ့ အဆင့်လေးတွေကိုတော့ အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ပြပေးထားပါတယ် ..
ဒီအောက်က အဆင့်က Chrome မှာတော့ လိုမှာ မဟုတ်ပါဘူး .. Firefox အသုံးပြုတဲ့ သူတွေ အတွက်တော့ Plugin တစ်ခု Install လုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ် ။။ Install Now ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ..
Plugin ကို Install လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ Firefox ကိုပိတ်ထား ဖို့ လိုပါတယ် .. မပိတ်ကသေးဘူး ဆိုရင်လည်း Finish မပေးခင် ပိတ်ပေးလိုက်ပါ ..
အပေါ်က အဆင့်တွေ အတိုင်း ပြီးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ Sky Net Line ကို အလွယ်တကူ ကြည့်လို့ရအောင် အပေါ်မှာ ပေးထားတဲ့ Search Box မှာ Sky Net လို့ ရိုက်ရှာလိုက်ရင် အောက်မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် .. ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ မြန်မာပြည်က တိုက်ရိုက်လွင့်တဲ့ Sky Net ရဲ့ အစီအစဉ်တွေကို ကြည့်ရှုလို့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ..
natthar April 14, 2012 at 12:31 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုရာ...Sky net အပြင်တခြားလိုင်းတွေပါကြည့်လို.ရတယ်..တကယ်ကျေးဇူးတယ်ပါတယ်ဗျာ
kyawmyooo April 14, 2012 at 4:39 AM
Thanks you so much my bro
Anonymous April 14, 2012 at 5:09 AM
Anonymous April 14, 2012 at 6:42 AM
sky net ကိုအချိန်တိုင်းဖမ်းလို့မရပါဘူး။ဘာ့ကြောင့်ပါနည်း?
ဘယ်အချိန်တွေဖမ်းလို့ရပါလဲ။ sky net လို့ရိုက်တာ ဘာမှမပေါ်ပါခင်ဗျာ။ ကြည့်ချင်လို့ဖြေပေးပါခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နေမင်းမောင် April 14, 2012 at 10:04 AM
အကို တစ်ခုခုမှားနေလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ... ကျွန်တော်တို့ စီမှာတော့ အမြဲတမ်းဖွင့်ထားတာပါ .. ကြည့်လို့ရပါတယ် .. sky net myanmar လို့ရိုက်ထည့်ကြည့်လိုက်ပါ ...
Lu Hman Gyi April 14, 2012 at 10:57 AM
အကိုရေ ကျွန်တော် လည်း မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ နေပြည်တော်ကပါ။ ကူညီပါဦးနော်။ Browxy ခံထားလို့လားမသိဘူးနော်။ ကျေးဇူးပြုလို့ ကူညီပါဦး။
နေမင်းမောင် April 14, 2012 at 11:00 AM
ကျွန်တော့် စိတ်ထင်တော့ အင်တာနက် လိုင်းကြောင်းများ ဖြစ်မလား မသိဘူးခင်ဗျာ ...
Thanksamillinon,bro
aung April 14, 2012 at 3:40 PM
အင်တာနတ် လိုင်းကြောင့်တော့ မဟုတ်လောက်ဝူး ထင်တယ် ကျနော်လည်း ဖမ်းလို့မရ၀ူးဖြစ်နေတယ် sky net လို့ ရိုက်တည့်လည်း ဘာမှမပေါ်ဝူး sky net myanmar လို့ ရိုက်ထည့်လည်း ဘာမှမပေါ်ဝူးဖြစ်နေတယ် ကူညီပေးပါအုံး...
နေမင်းမောင် April 14, 2012 at 10:24 PM
ဒါဆိုရင် နောက်ဆုံး Myanmar တစ်ခုထည်းရိုက်လည့် ကြည့်လိုက်ပါလားအကို .. ဒါက Skype Net ကနေဒီမှာ ကြည့်လို့ရပါတယ် ဆိုပြီး တရားဝင်ကြေငြာထားတာပါ .. တစ်ခြားလိုင်းတွေကော ဖမ်းလို့ရလား မသိဘူးခင်ဗျာ .. ကျွန်တော်တို့ စီမှာတော့ အားလုံးရပါတယ် .. ဘာကြောင့်ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်လည်း သေချာ မပြောပြတက်ပါဘူးခင်ဗျာ ...
99221 လို့ ရိုက်ထည့်ကြည့်ပါ။အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်
Firefox 11 ma ma ya bu pyit nay talaKO
အဲဒီ TVU Player က Window7- 64 bits မှာ အလုပ်မလုပ်ဘူးလား အစ်ကို... ကျွန်တော့် စက်မှာ Try နေတာ ဘယ်လိုမှကြည့်လို့မရဘူး။ ဘာ Lines မှလည်းကြည့်လို့မရဘူးဗျာ။ နည်းလမ်းလေးရှိရင်ပြောပြပါအုံး။
99221 လို့ ရိုက်ထည့်ကြည့်ပါ။အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် sure
myo234714 April 16, 2012 at 5:01 PM
manaing April 18, 2012 at 12:02 AM
ကျေးဇူးပဲ၊ ကျွန်တော် သင်္ကြန်တုန်းကမသိလိုက်ဘူး။အခုမှသိရတယ်။
mrwinkyawaung4 April 23, 2012 at 9:08 PM
thank ...............i see ok
mrwinkyawaung4 April 23, 2012 at 9:29 PM
အပေါ် မှာ ပြောသလို လုပ်လိုက်တယ် firefox 11 မှာရတယ် ဒေါင်းလုပ် ချပြီးရင် firefox ပိတ်ပြီး run ပြီးပြန် firefox ပြန်ဖွင့် ပြီး အဲဒီဆိုက် မှာ sign up လုပ်လိုက်တယ် လောလောဆယ် တလိုင်းတော ကြည်လိုရပြီး.........
NHLwyn May 1, 2012 at 5:53 PM
ကျွန်တော့ဖုန်းကနေ EVDO နဲ့ကြည့်တာတောင် မထစ်ပဲ ကြည့်လို့ရတယ်ဗျ....ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်
Allinic May 20, 2012 at 9:01 AM
ကျွန်တော့် စက် က window media player crashed ဖြစ်နေတယ်...ကြည်လို့ မရဘူးဗျာ...
cannot find skynet channel on tvunetwork
aungsan zarni September 14, 2012 at 4:50 PM
ဆရာရေ ကူညီပါဦး sky netကြည်ချင်လိုဆိုပြီး firefoxကနေ TUV PLAYER ကို download ချလိုက်တာ firefox ဖွင့်လို့မရတော့ဘူး TUV player ဘဲ့လာပြနေတယ် SKYNETတော့ကြည်လို့ရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်